Codsi ah in laga furo dariiqa bina-aadamnimada ee waqooyiga Suuriya .. Tirada dhimashada oo sii kordheysa – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Codsi ah in laga furo dariiqa bina-aadamnimada ee waqooyiga Suuriya .. Tirada...
Codsi ah in laga furo dariiqa bina-aadamnimada ee waqooyiga Suuriya .. Tirada dhimashada oo sii kordheysa
Sababo la xiriira howlgalka milatari ee Turkigu ka wado Siiriya, waxaa jira baahi loo qabo furitaanka dariiqa badbaadada bini’aadannimo ee aaminka ah ee waqooyiga Siiriya si loo daadgureeyo rayidka loona caawiyo kuwa dhaawacmay.
Ilaa iyo inta qiiqa uu kor usii kacayo dagaalka ka socda waqooyiga Siiriya, xaaladda bina-aadamnimada ayaa hoos ugu dhacaysa heerar xun, maalmo kadib duulaankii Turkiga ee aagagga Kurdiyiinta.
Dagaalka ayaa sababay barakaca 160,000, sida Qaramada Midoobay ay shaacisay, halka ilo kale ay kahadleen barakaca in kabadan 300 kun.
Qeybta caafimaadka ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay aagga dagaalka, xilli ay gabaabsi aad u daran ay ku jiraan daawooyinka iyo sahaydii caafimaad.
Deegaanka Ras al-Cayn, oo ah xarunta iska hor imaadka udhaxeeya Turks iyo kooxaha mucaaradka ee taabacsan Siiriya, dhanka kalena SDF, ayaa dhibaato ka haysataa kooxaha caafimaadka oo si weyn u hareereysan, kuna qasbay maamulka Kurdiyiinta inay codsadaan furitaanka dariiqa baniaadanimo si loo daad gureeyo dadka rayidka loona caawiyo kuwa dhaawacmay.
Natiijooyinka dagaalladii illaa iyo hadda waa in tobaneeyo dad ah la dilay boqolaal kalena lagu dhaawacay.
Xoghayaha gaashaandhigga Mareykanka, Mark Esper, ayaa Sabtidii sheegay in xabbad joojinta ka dhacda waqooyiga-bari ee Suuriya guud ahaanba ay tahay mid isku xidhan.
Esper wuxuu wariyeyaasha u sheegay jidkiisa Bariga Dhexe in dhammaan 1000-ka ciidan ee ka baxa waqooyiga Suuriya la rajeynayo inay u guuraan galbeedka Ciraaq si ay u sii wadaan ololaha ka dhanka ah ISIS iyo “inay gacan ka geystaan ​​difaaca Ciraaq.”
“Ka bixitaanka Mareykanka wuxuu si wanaagsan uga socdaa waqooyiga bari ee Siiriya. Waxaan ka hadleynaa toddobaadyo, ma ahan maalmo,” ayuu yiri.
Wuxuu intaas ku daray “qorshaha hada jira waa in dib loo howlgaliyo ciidamadan ku sugan galbeedka Ciraaq,” ayuu yiri.
Previous articleAppeals to open a humanitarian corridor in northern Syria .. The death toll is rising
Next articleWefti ka socda Midawga Yurub oo gaadhey somaliland+sawiro